Tag: taxonomy | Martech Zone
As DK New Media nyocha usoro ikike ọdịnaya anyị mepụtara maka ndị ahịa anyị, enwere usoro metụtara isiokwu anyị na-ewepụta, ọdịiche anyị na-amata, na ihe ndị ka mkpa anyị na -emepụta. Nke mbụ ụfọdụ nkọwa: Gịnị bụ taxonomy? Taxonomy - usoro nhazi usoro nhazi nke uzo abụọ nke uzo nke saịtị. N'ime ebe nrụọrụ weebụ gị na usoro ọdịnaya gị, nke a bụ ụdị - nke a maara dị ka nchịkọta - nke isiokwu ndị dị ka. Gbanye Martech Zone, anyị nwere